England Archive - Gool FM - page 5	twitter
Mourinho oo xaqiijiyay in Pogba uu dhaawac ku seegi doono kulanka Middlesbrough ee Axada
(Manchester) 17 Maarso 2017 Tababaraha kooxda Manchester United ee Jose Mourinho ayaa xaqiijiyay in Paul Pogba uu dhaawac ku seegi doono kulanka axada ee Middlesbrough.
Laacibka reer France ayaa dhaawac ku baxay kulankii xalay ay United 1-0 uga adkaatay kooxda dalka Ruushka ee FC Rostov oo marti u ahayd.
Mourinho ayaana xaqiijiyay in Pogba uusan ciyaari doonin kulanka Middlesbrough isaga oo sheegay inuusan hubin waqtiga dhabta ah ee uu dib ugu soo laabanayo kooxda.
Tabaare Jose ayaa la waydiiyay su’aalo dhawr ah oo ku aadan dhaawaca 
(England) 17 Mar 2017. Jose Mourinho ayaa muujiyay sida uu uga xun yahay siyaasada suuqa ee kooxda Man United mar uu u waramayay wariyaha Gary Lineker ee ka howl gala hilinka BBC.
Tababaraha reer Portugal ayaa sheegay inuusan marna iska iibin lahayn ama uusan kooxdiisa ka diri lahayn weeraryahanada Angel di Maria, Javier Hernandez ama Danny Welbeck.
“Manchester United waxay iska iibisay ciyaartooy aan marna iska iibin lahayn, waxayna soo iibsatay ciyaartooy aan weligeey soo iibsan lahayn,” Jose ayaa sidaa ku waramay.
(Manchester) 17 Maarso 2017 Tababaraha reer Portugal ee Jose Mourinho ayaa xalay sameeyay arin qosol leh kadib markii uu Moos siiyay daaficiisa Marcos Rojo ciyaarta oo socota.
Kaamirooyinka ayaa qabanayay tababare Mourinho oo Moos siinaya laacibkiisa reer Argentina qaybtii dambe ee ciyaarta.
Wuxuuna sheegay in Marcos Rojo uu dareemayay daal farabadan taasna ay keentay inuu ku caawiyo Moos si uu u helo tamar u suurogalisa inuu iska difaaco weerarka kooxda Rostov, United ayaana 1-0 ku hogaaminaysay ciyaarta waqtigaas.
“Marcos Rojo aad ayuu u daalanaa, sidaas darteed 
“Waxaan leenahay cadaw 
RASMI: Saddex sano iyo bar kaddib Aitor Karanka oo isaga tagay xilka tababaranimo ee Middlesbrough
(England) 16 Mar 2017. Kooxda dhibtooneysa xilli ciyaareedkan ee Middlesbrough ayaa xaqiijisay inuu xilka tababranimo ee kooxda uu ka dagay Aitor Karanka kaddib natiijooyin liita oo naadiga ku hogaamiyay boosaska hoos loogu dhoco heerka labaad ee Premier League.
Warbixin ay kooxda soo saartay ayay uga mahad celisay tababaraheeda iyadoona sheegtay inuu ku tagay wada hadalo labada dhinac ah.
“Waxaan jeclaan lahaa inaan naadiga Middlesbrough uga mahad celiyo fursada cajiibka ah iyo ciyaartoyda, shaqaalaha iyo dhammaan dadka kooxda aan la soo shaqeeyay,” Karanka 
Jose Mourinho iyo macallinka jir dhiska Man United oo isku dagaalay tababarka kooxda ka hor kulankooda caawa ee Europe League
(England) 16 Mar 2017. Tababarkii saakay ee kooxda Man United ayaa waxaa isku galay Jose Mourinho iyo mid ka mid ah xubnaha ugu muhiimsan tababarayaasha ka hoos shaqeeya macallinka mayilka adag.
tababaraha reer Portugal iyo Carlos Lalin oo ah mid ku taqasusay jir dhiska ayaa la kala dhex galay mar ay is qabteen ka hor tababarkii dhexe ee Man United maanta.
Mourinho iyo Lalin ayaa waji ka waji isku wajahay iyadoo ay dhex martay dood kulul mar ay saacada England tilmaameysay 10.30am 
Daawo qaabkii ciyaartoyda Monaco ay ugu dabaal dageen xalay qolka labiska kadib guushii ay ka gaareen Man City
(Monaco) 16 Maarso 2017 Kooxda AS Monaco ayaa xalay guul ka gaartay dhigeeda Manchester City oo marti u ahayd, waxayna ugu awood sheegteen 3-1.
City oo ku naaloonaysay guul 5-3 ah kulankii lugtii hore ayeey guul daro soo gaartay, Monaco ayaana xalay qaab ciyaareed cajiib ah kala hortagtay kooxda tababare Pep Guardiola oo markiisii ugu horaysay ku haray wareega 16-ka.
Ciyaartoyda kooxda AS Monaco oo u soo gudbay wareega 8-da ee koobka horyaalada yurub ayaa si wayn ugu dabaal dagay guushii ay gaareen iyo 
Chelsea oo diyaar u ah inay xagaagan iska iibiso Diego Costa si ay badalkiisa u soo iibsato labadan Laacib..
(London) 16 Mar 2017. Naadiga Chelsea ayaa la warinayaa inay diyaar u tahay inay xagaagan iska iibiso dhaliyaheeda Diego Costa si ay ula soo wareegaan labada weeraryahan ee da’da yar ee kooxaha Real Madrid iyo Everton Alvaro Morata iyo Romelu Lukaku.
Blues ayaa cidayaha ku dagaalantay si ay Stamford Bridge ugu sii heyso Costa markii ay bishii Janaayo soo weerareen kooxaha maal qabeenka ee Shiinaha kuwaa oo doonayay xiddiga reer Spain.
Laakiin tababre Antonio Conte ayaa iminka go’aansaday inuu kaash kala boxo 
Horudhaca kulanka caawa ee Europa League kooxaha Man United v Rostov… (Labada kabtan ee kooxahan oo kulankan seegaya)
(Manchester) 16 Maajo 2017 – Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa caawa soo dhowaynaysa naadiga dalka Ruusha ka dhisan ee Rostov lugta labaad ee wareegga 16-ka Europa League.
Maxaa ka cusub kooxaha ciyaaraya?
Man United ma heli doonto adeegga labadeeda weerar ee Anthony Martial iyo Wayne Rooney kulanka ay caawa Old Trafford ku soo dhaweyn doonaan naadiga Rostov sidaa waxaa xaqiijiyay macallin Jose Mourinho.
Xiddiga reer France Martial, Luke Shaw iyo Bastian Schweinsteiger ayaa tababar la qaatay ciyaartoyda da’da yar, waxaana ay shalay 
Mario Balotelli oo daawanayey kulankii xalay ay Manchester City guuldarrada kala kulantay Monaco ee Champions League
(Monaco) 16 Maajo 2017 – Weeraryahanka Mario Balotelli ayaa fadhiyey garoonka Stade Louis II isagoo daawanayey kulankii kooxdiisii hore ee Manchester City ay guuldarrada kala kulantay Monaco ee Champions League.
Waxa uu u muuqday Mario mid rabay inuu ku raaxaysto sida ay kooxdiisii hore ugu soo gudbayso siddeed dhammaadka koobka horyaallada Yurub.
Laakiin wixii dhacay waxay ahaayeen waxaan la filaynin, iyadoo kooxda Manchester City ay guuldarro 3-1 kala kulantay Monaco oo ay marti u ahayd lugta labaad ee 16-ka Champions League, Sky 